५० वर्षका यी बुबालाई यस्तो सम्मको ठ गी,विदेश पुर्याउने भनेर पैसा लिएर न क्कली टिकट दिए ,एअरपोर्ट मै यस्तो भयो - ABNews Nepal
५० वर्षका यी बुबालाई यस्तो सम्मको ठ गी,विदेश पुर्याउने भनेर पैसा लिएर न क्कली टिकट दिए ,एअरपोर्ट मै यस्तो भयो
Feb 12, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, alif Khan, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, latest ramailo samachar, taja khabar nepal
वैदेशिक रोजगारि नेपालिहरुको लागि रहरभन्दा बढि बा’ध्यता हो । देशमा रोजगारिको अवसर नहुदा नेपालका युबायुबतिहरु बर्सेनि हजारौको संख्यामा बिदेशिइरहेका छ्न र उनिहरुको गन्तव्य भने खा’डी मुलुकहरु बन्दै गएका छ्न । घरपरिवारको अबस्थामा केही सुधार आउने हिसाबले दुइचार पैसा कमाउन भनी गएका नेपालीहरुको स”मस्याको बिषय किन बन्दैछ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी ? आजको घटनापनि वैदेशिक रोजगारिकै कारण उब्जिएको एक समस्याको बिषय जुन पछिल्लो पटक निकै देखिदै आएको छ त्यसैमा आधारित छ ।
झापा घर भएर बसोबास गर्दै आएका ५० बर्षिय प्रेम प्रसाईं नाम गरेका एक पुरुष जो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिगत लामो समयदेखि साउदी अरबमा रहदै आएका र १७ दिनको छुट्टि लिएर घर फर्केका थिए, उनै पुरुष आज आफ्नो गु”ना”सोसहित मिडियामा आएका छ्न । आफुलाइ ६ तारिखको फ्लाइट भनेर प्लेनको न”क्क”ली टिकट दिएर ठ”गे”को बताउदै उनी आज आफ्ना भतिजाको साथमा मिडियासामु आएका छ्न । उनको एजेन्ट भने हाल पैसा खाएर फ”रा”र भएको अबस्था छ ।
उनी छुट्टिमा घर आएको यो पहिलोपटक भने हैन रहेछ यसअघि पनि उनि छुट्टिमा आइसकेका रहेछ्न । छोरिको बिबाहको लागि नेपाल आएका उनको यहि साल मार्च महिनामा तीन बर्षको कार्यकाल भने सकिन आटेको रहेछ । उनि बिदेश फर्किन मात्र आटेका थिए तर अचानक उनको पि सि आर पोजिटिभ देखिएपछी भने आफु कम्पनीले तोकेको समय फर्किन नसकेको उनी बताउछ्न ।
पि सि आर पोजिटिभ देखिएपछी काकाभतिज चियापसलमा दु”खे”सो पोख्दै गर्दा अकबर अलि नाम गरेको उक्त ठ”ग मुसलमानसग भेट भएको बताउछ्न उनी । उक्त ब्यक्तिले आफुले सम्पुर्ण काम गर्ने बताउदै आफ्नो ४५ हजार रुपैया खाइदिएको बताउछ्न उनि । ६ तारिखको फ्लाइट भनेर नक्कली टिकट दिलाएर ४५ हजार लिएर हाल फरार छ्न अकबर । क”ठै ब”रा ! घरबाट बिदेशको लागि भनेर बि”दा”इ भएर त हिडे उनी तर एयरपोर्टमा उनको टिकट नै न”क्क”ली देखियो ।
एयरपोर्टले टिकट नै न”क्क”ली भनिदिएपछि आफ्नो सबै प्रयास ना”का”म रहेको बताउछ्न उनि । सात बजे आउछु भनेको मान्छेले आउदैछु भनेर आफुलाइ खुब झुलाएको र त्यसको केही समयपछी केटिले फोन उठाएर उनको बारेमा केही थाहा नभएको बताएको उनको भनाइ छ । त्यसपछी भने आफुलाइ शं”का भएको र पुलिस केस पनि गरेको तर उसले फोन नै स्विच अफ गरेको बताउछन उनि । उनको भतिजको भने उक्त पुरुष चिनजान कै रहेको कुरा पनि बाहिरिएको छ ।
उनका भतिजसग भने म्यासेजमार्फत उक्त पुरुषले चाडै भेट्ने आश्वासनसमेत दिएछ्न । क”ठै ब”रा ! धु”रु”धु”रु रु”ए उनि, छोराछोरी सानै छ्न भन्दै खुब भ”क्का”नि”ए उनी । टिकटको लागि आफ्नै गोजिको पैसा खर्च गरेर गए अहिले भिसा पनि क्यान्सिल भयो भन्दै रुन्छ्न उनी । मिडियाकर्मीले समेत दुइचोटि कल त गरिन उनलाई तर उनको कुनै प्रत्युत्तर भने आएन ।
बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा:-
फो-क्सो पि-डि-त महिला लाई’ काेठा भाडा नतिरेको भन्दै ८ महिने शिशु सहित घर नि-का-ला’ परिवार-को बि-च-ल्ली
प्यूठान जिप कसरी खस्यो र आफूहरू कसरी बाँचे भन्नेबारे यसो भने . विवाहको दिन भएको घटनाले मनमा ठूलो चोट परेको बताए